Banbax howleedka Dib-u-eegista Dastuurka oo ka furmay Djibouti - Latest News Updates
Banbax howleedka Dib-u-eegista Dastuurka oo ka furmay Djibouti
Djibouti:-Banbax howleed ku saabsan Dib-u-Eeegista Dastuurka ayaa manta uga furmay Hay’adaha u xilsaaran Dib-ueegista Dastuurka – Wasaaradda Arrimaha Dastuurka, Guddiga Lasocdka Baarlamaanka iyo Guddiga madaxa bannaan ee dib-u-eegista iyo Hirgelinta Dastuurlka – magaalada Djibouti ee dalka Djibouti.
Banbax howleedka oo socon doona mudda 5 maalmood ah waxaa looga shaqayn doonaa sidii loo heli lahaa istiraatiijiyad midaysan oo ku saabsan wacyi galinta iyo latashiyada dadwaynaha oo ay isla meel dhigaan ha’adaha u xilsaaran dib-u- eegista dastuurka, sidoo kale waxaa inta uu socdo shirkan lagu diyaarin doonaa qorshaha midaysan ee wacyigalinta iyo latashiga dadwaynaha ee dib-u-eegista dastuurka.
Furitaanka kulanka waxaa kalmado kookooban ka jeediyay wasiirka Wasaaradda Dastuurka mudane C/raxmaan xoosh Jibriil, Gudoomiyaha Guddiga La socodka Baarlamaanka, Mudane Cabdi xasan Cawaale Qaybdiid iyo Gudoomiyaha Guddiga Madaxa bannaan ee Dib-u-Eegista iyo Hirgelinta Dastuurka, Mudane Maxamed Daahir Afrax, sidoo kale waxaa casharro ku saabsan samaynta istaraatiijiyadda ka soo jeediyay quburro ka socda hayadha maxa plan iyo UNDP.
Wasiirka Wasaaradda Arriimaha Dastuurka Abuukaate C/raxmaan Xoosh Jibriil oo Kulanka si rasmi ah u furay ayaa sheegay in ay muhiim tahay in si wadajir ah loo wajaho latashiyada iyo wacyigalinta dadwaynaha ee dib-u-reegista dastuurka.
“la tashiga dadwaynaha waa muhiimadda koowaad ee hay’adaha u xilsaran dib-u-eegista dastuurka si loo helo aragti midaysan oo ku aadan dib-u-eegista dastuurka, sidoo kale waxaa muhiim ah in guddiyada iyo wasaaradda ay ka shaqeeyaan sidii loo heli lahaa xasilooni siyaasadeed si loo dhamaystiro dastuurka” ayuu yiri wasiir Xoosh.
Gabagabadii Gudoomiyayaasha labada guddi ee kala ah Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid – Guddiga La Socodka iyo Prof. Mohamed Dahir Afrax – Guddiga Madaxa Bannaan ee Dastuurka ayaa labaduba soo dhoweeyay in si wada jir ah looga shaqeeyo diyaarinta istaraatiijiyadda midaysan ee Wacyigalinta iyo Latashiyada dadwaynaha ee dib-u-eegista dastuurka.